Ka dib markii Raadka waa barnaamij software aad u dabacsan, iyo halka ay diirada ugu weyn waa ku saameeyaa oo ku dar hal wax soo saarka video, waxa loo isticmaali karaa in la sameeyo qaar ka mid ah tafatirka iyo sidoo. Ka dib markii Saameynta ku jira qalab badan oo kuu ogolaanaysa inaad sameeyo dhowr hawlaha tafatirka in aadan ka filan lahayd, oo maanta waxaan xaajoonayaan jarida video, iyo haddii ay tahay in la samayn karaa ka dib markii saamaynta ama aan. Jawaabta in gaaban waa in ay haa tahay, karaankeeda ah, laakiin waxaa jira wax yar ka badan waxa ay u badan tahay in, waxaan heli doonaa in ay hal dhibic ka dib in, laakiin marka hore, waxaan ku muujin doonaa sida ay u fududahay waa in la gooyaa aad video adigoo isticmaalaya barnaamijka adobe ah.
1. Launch ka dib Dhibaatooyinka iyo dajiyaan aad video
Shaqada ugu horaysa waa in la furo mashruuc cusub, iyo shuban aad video u galay. First ka menu ugu weyn waa in ay doortaan halabuurka cusub.
Waa kuwee ka dibna kor u furmay menu ka kooban, dooran xalinta iyo si aad ku doonayaan, oo markaas la abuuro aad ka kooban.
Waxaad hadda diyaar u ah inay dajiyaan aad video.
Taana waxaa lagu gaarayaa iyada oo menu file / dejinteeda sida aan halkan ku arko
Marka aad haysato video, aad u jiidi karaa waqtiga sida aan hoos ku arki.
Hadda halkan video clip aan wax badan ka yar oo ka gaaban tahay halabuurka, laakiin ujeedooyin of this ma jabna. Waxaad saamayn isticmaali karaan inkastoo, sida in dib markii Raadka, waxaad heli kartaa video ka xigta dhabta ah wareegsan gudaha ka kooban sidii loo ciyaaro, saamayn xiiso leh si ay isugu dayaan.
2. tafatirka video ah
Si aad wax cad, tallaabo hore waa Mozilla ee ku saabsan waqtiga si cad u Waxaan arki karaa bilowga iyo dhammaadka track video aan.
Hadda waxaan ka bilaabi kartaa inaad ka gooyay track video ku burburi aan rabo. Tani waa mid aad u fudud, dooro track video ee waqtiga, guuraan tilmaan u barta saxda ah aad rabto in aad ka gooyay wadada, ka dibna aad sidoo kale u isticmaali kartaa edit menu edit> lakabka kala ama Control toobiye ah + wareejin + D.
Si kasta oo aad u dhammayn, waxa aad ka tagaa isaga oo aad kala track video, iyo qaybta labaad waxaa badashay off galay lakabka gaar ah aad si aad ku dari kartaa in saameyn kala guurka iyo wixii la mid ah sida aad rabto.
Dabcan, ma aad koobna mid ka mid cut, waxaad samayn kartaa sida ugu badan aad rabto oo ay awoodaan inay sameeyaan iyaga dib u habeeynta iyo wixii la mid ah haddii aad dooneyso.
3. qalab dheeraad ah
Waxaa jira dhowr ah faa'iidooyinka iyo jarida sidan, in lakabyada gaar ah awood saamayn arrin adag iyo processing in la gebi ahaanba si madaxbanaan loo qabto oo ku saabsan qayb kasta oo ka mid video ah, ay si sahal ah reordered karaan iyo sidoo dhibaato la'aan.
Sida aan halkan ka arki kartaa, video ciyaari doonaa amar gabi ahaanba ka duwan haatan. Mid ka mid ah waxyaabaha aad aad u fudud marka aad leedahay taas samayn karo waa in lagu daro saameynta kala guurka, si fudud u muujiyo hal dhibic ka on waqtiga kala guurka, halkaas oo ay tahay in ay bilaabaan, iyo ka dooro mid ka menu saamaynta.
Marka daray aad qabsato karaa waqtiga ay ku qaadato iyo wixii la mid ah si ay u helaan saamayn saxda ah aad rabto.
Waxaad dabcan tirtiri kartaa clip kasta oo aadan rabin in ay si fudud u tirtiro lakabka.
4. Dhoofinta faylka
Marka aad ku faraxsan tahay in aad ka dibna file la dhammeeyayna ay dhoofin karaan file> dhoofinta menu
Doorashada 'dari moodo safka' aad u soo bandhigaysaa la menu ka abaalmarin kuu oggolaadaan in aad doorato goobaha, filename iyo halka wax soo saarka final sidii aad u baahan tahay.
Taasina waa sida fudud goynta video waa la Adobe ka dib Raadka.
Sida waxaynu ku muujinnay, waa ma aha oo kaliya ay macquul tahay, laakiin si cadaalad ah mid sahlan si ay u dhinto video ee Adobe ka dib Raadka, iyo xaaladaha qaarkood waxaa laga yaabaa in aad u faa'iido, si kastaba ha ahaatee, software aan loogu talagalay in hawlgallada caynkan oo ay jiraan qalab fiican ka soo baxay waxaa loo sameeyo. Adobe ee u gaarka ah jilitaankii Pro bixiyaan adeegyo badan braoder ah qalab loogu talagalay goynta iyo falinjeeerka oo ka dhigaysa boosteejo ah oo aad uga fiican tahay geeddi-socodka. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dad badan oo tafatirayaasha video at dhan miisaaniyadda loogu talogalay gaar ahaan loogu talagalay goynta iyo falinjeeerka video oo laga yaabo in ay soo bandhigaan doorasho fiican tahay isticmaalka ka dib Dhibaatooyinka si ay u dhammayn.
Video tafatirka waa mid aad u badan meel ay qalab ku haboon shaqada saxda ah waa boqorka, iyo inta aad wax qaban karto hab kale, waa wax badan, inta badan ka sahlan si ay u tagaan, waayo, qalab sax ah mar kasta.
Adobe ka dib Raadka waa wax soo saarka fantastic ah ee ku daray saamaynta iyo animations galay mashruuc, laga yaabee ugu fiican ee noociisa ah, iyo halka waxa loo isticmaali karaa si ay u dhinto video, su'aasha waa in ka badan noqon sameeyo aad rabto in aad. Jawaabtii in in uu noqon doono, dhowr jeer ugu, ma.
Tani waa tutorial aasaasi ah oo ku saabsan Adobe ka dib Raadka, xirfad software video tafatirka. Si kastaba ha ahaatee, haddii video tafatirka waa cusub oo aad si, tixgelin Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Tani waa aalad awood laakiin si sahlan loo isticmaalo dadka isticmaala kaliya bilaabaya. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
> Resource > Video > Sida loo jar Video in dib markii Raadka